About – POSITIVE SANSAR
प्रेरणादायक सामाग्रीहरुको एउटा छुट्टै संसार POSITIVE SANSAR मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।
खुशी सफलताको उच्चतम बिन्दु हो । यो कुनै बाहिरी चिजमा पाइदैन । यो हामी भित्रै हुन्छ । यो हाम्रो दिमागको एउटा अबस्था हो ।
तपाईंको आत्मा र महान जिबनको लागि प्रेरणादायक सामाग्रीहरुको एउटा छुट्टै संसारको रुपमा POSITIVE SANSAR ग्रुप द्वारा स्थापित एउटा छुट्टै संसार नै POSITIVE SANSAR हो , जसले तपाईंको जिबन बदल्न सक्छ ।
अहिलेसम्मको तपाईंको समय पाठ र आशीर्वादले भरिएको थियोे अबको बाकी समय तपाईंको जिबनको महान बर्षहरु बन्न तयार हुनेछन …
हामी तपाईंको उत्साहलाई पत्ता लगाउन चाहान्छौ किनकि जब तपाईं तेसो गर्नुहुन्छ , तपाईं आफुलाई स्वतन्त्र हुनबाट रोक्नसक्नुहुनेछैन । तपाईं आफैलाई रोक्न सक्षम हुनुहुनेछैन । ढिलाई सुस्ति हराउनेछ र Action ले ओभर टेक गर्नेछ अनि Action लिनुहुनेछ ।
हामी चाहान्छौकी तपाईं आफ्नो कारणलाई पत्ता लगाउनुहोस …जो कारण तपाईं किन चाहनुहुन्छ …कारण तपाइलाई किन आबस्यक छ । कारण तपाईं जे गर्नुहुन्छ सबै गर्नुहुन्छ । यो कस्को लागि हो ? तपाईंले कस्तो उदाहरण सेट गर्नुपर्दछ ? तपाईं अरुलाइ कस्तो आशीषहरु दिनुहुन्छ ?
हामी तपाइलाई यो बुझाउन चाहान्छौकि जिबनमा कुनै पनि महान कुरा सजिलो हुँदैन । यसले तपाइलाई आफ्नै सबैभन्दा ठुलो जीवन सिर्जना गर्न समाबेश गर्दछ । तपाईंको सबभन्दा राम्रो जिबन … तपाईं सबैभन्दा ठुलो क्षेमतामा पुग्नको लागि केही कामको आबश्यकता पर्दछ …र यो निश्चित रूपमा यसको लायक हुनेछ । यदी यो पुरस्कारको लायक छ भने यो तपाईको लडाइँको लागि मूल्यवान हुनेछ ।
हामी तपाईंको लागि धनी बन्नको लागि कामना गर्दछौ । पैसाको मामिलामा धनी , समृद्धि होइन …यद्यपि त्यो पनि आउनेछ । हाम्रो मतलब हो कि आत्मा मा, आनन्दमा धनी, उपस्थितिमा धनी, प्रेममा धनी, महान सम्बन्धहरुमा धनि … । धनी त्यो कुरामा आफुलाई ती अदृत मानिसहरुको वरिपरि बनाउनुहोस जो तपाईं जस्तै मार्गरेखा कोरन खोजिरहेका छन ।
हामी आशा गर्दछौ तपाईं साच्चिकै धनी बन्नुहुनेछ …तपाईंको आत्मा मा । धनको सबैभन्दा गहिरो र वास्तविक रुप बैंक द्वारा मापन गर्न सकिदैन । हामी चाहान्छौ तपाईं गहिराईमा जानुहोस । आफुलाई निरन्तर अगाडि बढाउ । विकसित हुन जारी राख्नुहोस । सबै चिजहरुलाई अर्को (level) चरण मा लैजानको लागि । शान्ति खोज्न । दया र करुणा मा बाँच्न । अरुको लागि उदाहरण हुन । एउटा महान जिबन बास्तबमा कस्तो देखिन्छ भन्ने एउटा चम्किलो उदाहरण हुन … ।
अत : तपाईंहरु प्रती हाम्रा इच्छाहरु , चाहानाहरुलाई वास्तविक रूपमा विकसित गरानको लागि हामीले सामाजिक संजाल विभिन्न प्लेटफमहरु Facebook, Instagram, YouTube र Website बाट एकैसाथ “POSITIVE SANSAR” लाई सुरुवात गरेका छौ । यहाँ हामीले केहिबआफै द्वारा सृजित तपाईंको आत्मा र महान जिबन बनाउनको लागि आबश्यक पर्ने विभिन्न प्रेरणादायक सामाग्रीहरु एबं तपाईंहरु द्वारा प्रेषित सामाग्रीहरु प्रकाशित गर्दछौ । [ ] हरेक ब्यक्तिले यथास्थितिमा टेकेको धरातल जस्तोसुकै सुकै भय पनि उसको जिबनलाई उसको आत्मा देखि नै कसरी त्यो उच्च स्तरको खुशी , संतुष्टि , आनन्द र साच्चिकै एउटा महान जिबन जिउन सकिन्छ भन्ने उदेश्य द्वारा संचालित यस् “POSITIVE SANSAR” लाई समय सापेक्ष अनुरुप वृद्धि बिकासको लागि यहाँहरुको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने बिश्वास लियको छौ । तपाईंहरुको उत्साहजनक , अमुल्य साथ एबं सहयोग बिना हामी कहिल्यै अगाडी बढन सक्ने छैनौं । तसर्थ तपाईं हामी सबै मानवत्वको हितको लागि त्यो उच्च स्तरको खुशी , संतुष्टि , आनन्द र साच्चिकै एउटा महान जिबन को लागि आफ्नो स्थानबाट तपाईंको सक्दो सहयोगको हामी पुर्ण आशा गर्दछौ ।
यथार्थ मन छुने लाइनहरु संग्रह तिस
केहि मनछुने लाइनहरु भाग १२
यथार्थ मन छुने लाइनहरु संग्रह – दोस्रो